Mamolavola lalàna hifehezana ny aterineto sy ny famahanam-bolongana i Kambodza · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Janoary 2009 9:16 GMT
Eo ampandrafetana ny lalàna hanitarana ny ny lalàna misy ankehitriny hisahana ny endrika fampitam-baovao hafa, ka tafiditra amin'izany ny aterineto ny minisiteran'ny fampahalalam-baovao Kambôdziana. Araka ny fanadihadiana tsy ara-panjakana moa dia mihoatra ny 70 000 ankehitriny ny isan'ny mpampiasa aterineto any Kambôdza amin'izao fotoana izao.
Hanitatra ny andraikitry ny Minisitera hiatrehana ny firoborobon'ny serasera any Kambôdza ity lalàna vaovao ity. Miisa 25 ny radio ary 7 ny fahitalavitra any Phnom Penh amin'izao fotoana izao. Nolazain'ny fitondrana anefa fa tsy tafiditra amin'ity lalàna vaovao ity ny vohikala vaovao. Hoy i The Mirror :
Norafetina taorian'ny nampisehoan'ny vohikala Reahu.net an'ilay olon'ny lanitra ivavahana Apsara mila hiboridana nomelohin'ny fitondrana ity lalàna vaovao ity.
Notsongain'i Ka-set ny tenina mpiasam-panjakana iray manambara fa entina mahafantatra kokoa ny tompon'andraikitra misahana izay misy any amin'ny aterineto ity lalàna vaovao ity :
Misy ary ny vondrona haino aman-jery sy mpamaham-bolongana no mitsikera ity lalàna ity. Manahy i Vuthasurf fa toa entina hampanginana tsikera amin'ny aterineto ity lalàna ity:
Nanamarika ny fikambanana Kambôdziana miaro ny mpanao gazety (CAPJ) fa “tsy misy tranga lehibe tamin'ny aterineto nanana fiantraikany ratsy tamin'ny fiaraha-monina Kambôdziana.” Nampian'ny vondrona fa:
Lavin'ny fitondrana fa entina hifehezana ny aterineto izy ity. Itrikitrihany ary fa “ny fampitam-baovao vita printy sy ny haino aman-jery ihany no tena kendren'ity lalàna ity.”